INXALENYE YE-INDIPENDENT PANORAMIC IN REGGELLO - I-Airbnb
INXALENYE YE-INDIPENDENT PANORAMIC IN REGGELLO
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRossella
Amagumbi amakhulu nakhanyayo, ikhitshi elinombono, i-panoramic loggia.Igadi enkulu ebiyelweyo. Kwi-25 km ukusuka eFlorence, 7 km ukusuka kwisikhululo sikaloliwe sase-S.Ellero, useFlorence ngemizuzu engama-30. Kwi-12 km ukusuka e-MALL (Leccio) kubathandi befashoni. Sikwimitha engama-508 ngaphezulu kwenqanaba lokubona. Akukho rhafu yabakhenkethi. Ukungena okuzimeleyo. Udinga imoto ukuze ufike kuthi. Indlu ihlanjululwe nge-ozone sterilzer ngaphezu kokucoca ngononophelo lwesiqhelo.
Ezantsi kweVallombrosa entliziyweni eluhlaza yaseTuscany apho unokuphumla khona. Isibhakabhaka esineenkwenkwezi kunye nokutshona kwelanga okuhle kukulindile. Ungatya ngaphandle phantsi kweveranda. Ndicebisa iindwendwe ezisijoyina kwiinyanga zasebusika ukuba zinxibe iimpahla ezifanelekileyo ezinikezwe ukuphakama (phantse intaba) esikuyo. IINDLEKO ZENKONZO zibandakanyiwe KWIxabiso LOKUHLALA. Kwiindwendwe ezifikelela kuthi kwiinyanga zasebusika, ndincoma iimpahla ezifanelekileyo ezinikwe ukuphakama esikuyo.
Sisemaphandleni kodwa kwindawo ehlala abantu. Kumazwe angabamelwane uya kufumana i-mini kunye neemarike ezinkulu kunye neevenkile zokuthenga.Izitali zokukhwela abo bathanda ukukhwela. Iindlela zelizwe kwiindlela zokuhamba. Sisentliziyweni eluhlaza yeTuscany kunye nehlathi elihle laseVallombrosa kunye ne-Abbey yayo.Iindlela ezingenakubalwa eziphawulweyo zokuhamba. Sise-Italiya kwaye iicawe azisileli.KwiCascia ekufutshane iTrittico yaseMasaccio nakwiPieve a Pitiana.iPala yaseGhirlandaio. Indlela eya apho igangathiwe. I-REGGELLO isixeko seoli, ebusika imithi yethu yomnquma ivelisa ioyile eyongezelelweyo ekhethekileyo, eneasidi ephantsi. SiseChianti kwaye abavelisi abancinci basekhaya bathengisa iwayini.
Umbuki zindwendwe ngu- Rossella
Ngokukhethekileyo siyakwamkela iindwendwe zethu ngokobuqu kodwa ngenxa yemeko yangoku siya kukhangela ngebhokisi yediphozithi ekhuselekileyo enezitshixo kunye nemiyalelo.Sifuna ukukhumbula ukuba i-apartament iya kuba simahla kwiintsuku ezimbini ngaphambi nangemva kokubhukisha nganye ukuze vumela ukucocwa kunye nococeko lwawo onke amagumbi.Siya kuhlala samkelekile kwaye sikhona kuyo nayiphi na imfuno.
Ngokukhethekileyo siyakwamkela iindwendwe zethu ngokobuqu kodwa ngenxa yemeko yangoku siya kukhangela ngebhokisi yediphozithi ekhuselekileyo enezitshixo kunye nemiyalelo.Sifuna uku…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$521